September 9, 2019 - Myitter
ဖုန်းလွတ်​ကျပြီး မှန်​မကွဲ​သွားလို့ ဖုန်းပြင်ဆိုင်သွားလိုက်သောအခါ
September 9, 2019 Myitter 0
၃ ရက်အတွင်း ၆ ပေါင်ကျစေနိုင်မယ့် …Diet Plan လေးပါ…
၃ ရက်အတွင်း ၆ ပေါင်ကျစေနိုင်မယ့် Diet Plan….. ၃ရက်အတွင်းမှာ ၀ိတ်ချဖို့ ဆိုတာ သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥကို အခြေခံတဲ့ Diet Plan လေးကတော့ ၃ရက်အတွင်းမှာ သင့်ကို အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်….. ဒီ ၃ရက် […]
ရန်ကုန် မီတာယူနစ်ပေါင်း သန်းချီလျော့ကျသွားသော်လဲ ငွေကျပ်၃၆ဘီလီယံကျော် အမြတ်ရရှိ
မီတာခများ တိုးမြှင့်ပြီးနောက်ရန်ကုန်တွင် မီးသုံးစွဲမှု ယူနစ်ပေါင်း သန်းချီလျော့ကျသွား၊ သုံးစွဲမှု လျှောဲ့သွားသော်လည်း သုံးစွဲခတင်လိုက်သဖြင့် ငွေကျပ်၃၆ဘီလီယံကျော် ပိုရခဲ့ ရန်ကုန် ၊စက်တင်ဘာ ၉ရက်၊ မီတာခ တက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်တွင် မီးသုံးစွဲမှု ယူနစ်သန်းချီလျှော့သွားသည်။ မီတာခတိုးမြှင့်ကောက်ခံမှု မပြုလုပ်ခင် နောက်ဆုံးဇွန်လ၏ သုံးစွဲမှု ပမာဏ က […]
ကောက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ပြန်ပေးတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့အမျိုးသား အလုပ်နဲ့တိုက်ခန်း ဆုချီးမြှင့်ခံရ …!
ကောက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ပြန်ပေးတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့အမျိုးသား အလုပ်နဲ့တိုက်ခန်း ဆုချီးမြှင့်ခံရ …! ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို တစ်ပြားမှမသုံးဘဲ ပြန်ပေးတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့ အမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့လုပ်ရပ်အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုပြန်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ အလုပ်လက်မဲ့၊ အိမ်ခြေမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက် အလုပ်နဲ့ တိုက်ခန်းသစ်တစ်ခန်းပါပဲ။ အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် […]
အဂတိမှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော BPI စက်ရုံမှူးအတွက် အကိုတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်ချက် ဒီကလေး နှင့် စတွေ့တော့ သူ ၁၀ နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ် သူ့အကိုအကြီးဆုံး(ဖိုးသီ) နှင့် ကျွန်တော်က အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့အိမ်မှာပဲ နေ ကျူရှင်အတူတက် စားအိမ်သောက်အိမ် နောက် ကျွန်တော် ၁၀ တန်းအောင်ပြီး […]
ဓာတ်ဆားမှုန့်ရေဖျော်သောက်တော့မယ်ဆိုရင်သတိထား (ဓာတ်ဆားဆိုတာ ဘာလဲ…ဘာအတွက်သုံးတာလဲ)… ဓာတ်ဆားမှုန့်(Oral Rehydration Salts)ဆိုတာ…ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းခြင်းအတွက်ရေနဲ့ဖျော်သောက်တာပါ…ယခုလို အလွန်ပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာ ချွေးထွက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေနဲ့ဆားဓာတ်တွေပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အကောင်းဆုံးဆေးမှုံ့ပေါ့… (ဘယ်လိုဓာတ်ဆားသောက်ရင်အကောင်းဆုံးလဲ)… မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်ဆား…နိုင်ငံတကာမှတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ဓာတ်ဆားမျိူးစုံ…အပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာ ရိုးရိုးဓာတ်ဆားများ/သစ်သီးစုံဓာတ်ဆားများ… အများအပြားရောင်းချနေပြီး တမျိူးနဲ့တမျိူးအာနိသင်သိသာစွာကွာခြားခြင်းမရှိပဲ…အားလုံးကောင်းကြပါတယ်… အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကြာရှည်အထားခံတာကတော့…မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးစက်ရုံ(MPF)ကထုတ်တဲ့ […]
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဘုရားကျောင်းတွင် တစ်နှစ်လေးကြိမ်သာမြင်တွေရခဲသည့် နေနဲ့တံခါးပေါက်တတန်းကျသည့်မြင်ကွင်း
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဘုရားကျောင်းတွင် တစ်နှစ်လေးကြိမ်သာမြင်တွေရခဲသည့် နေနဲ့တံခါးပေါက်တတန်းကျသည့်မြင်ကွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘူရီလန် ခရိုင်က ခမာ(ကမ္ဘောဒီယား) ယဉ်ကျေးမှု Phanom Rung ဘုရားကျောင်းတော်အတွင်း တစ်နှစ်မှာ လေးကြိမ်သာ မြင်ရတဲ့ နေထွက်ချိန် တံခါး ၁၅ ပေါက် တတန်းတည်းကျပြီး နေရာင်ကိုမြင်တွေ့ ရသော မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် […]
ဇနီးသေဆုံးမှုကြောင့် သိန်းတသောင်းခွဲလျော်ကြေးတောင်းသူထံသို့ ဆရာဝန်တဦးရဲ့ ပေးစာ
ဆေးရုံတက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်ဇနီးအတွက် သက်ဆိုင်ရာမှ တောင်းပန်မှု မပြုလုပ်၍ ကျန်ရစ်သူခင်ပွန်း (ကိုသီဟကိုကို) မှ တရားစွဲဆိုထားသည်ဟု အလဲဗင်းမီဒီယာမှာ မကြာသေးမီက ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုသတင်းကြားမိတော့ ကျွန်တော်တုန်လှုပ်သွားမိတာအမှန်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၃ ပါတ်ကျော်လောက်က ကိုသီဟကိုကိုတင်သော ဇနီးသည်ကွယ်လွန်သွား၍ ဝမ်းနည်းပူဆွေးဖြစ်ရကြောင်းပို့စ်ကို ဖတ်ရစဉ်က ကျွန်တော် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ […]
ဆိုင်ကယ်နဲ့ တိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားသူ နောက်မှ နောင်တရကာ ဆေးရုံအထိ လာတောင်းပန်း
ဆိုင်ကယ်နဲ့ တိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားသူ နောက်မှ နောင်တရကာ ဆေးရုံအထိ လာတောင်းပန် လမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဆိုင်ကိုယ်နဲ့ ဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ အသိတရား ပြန်ဝင်လာပြီး၊ လူနာရှင်ရှိရာ ဆေးရုံမှာ ကိုင်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက်တောင်းပန် အဖမ်းခံခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Metro သတင်းစာရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ […]